Down! Down! OPDOn Yaroon Isaa Amma! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDown! Down! OPDOn Yaroon Isaa Amma!
Down! Down! OPDOn Yaroon Isaa Amma!
Damee Boruuntin, Bitootessa 2, 2019
Mootummaan Impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru seeraanis tahe heeraan Mootummaa EPRDF. Afaanfajjii fi dogongoraa Uummata Oromoo gowwoomsuuf godhamu keessa inni guddaan mootummaan kun kan Oromooti jechuu dha. Kijiba kanan Oromoon Masaraa Minilki gale jedhanii warra hudduu of hidhiitu argaa jirra. Garuu ilmaan Oromoo Masaraa Minilki keessa galee haqa Uummata Oromoof dhaabbatu ykn hojjetu tasa argaa hin jirru. Masaraa Minilki keessatti kan wal caccabsaa jiru namoota bara Dargii hammeenya hiriyyaa hin qabne uummata Impaayera Itoophiyaa irraan gahaa turan akka tahe wal nama hin gaafachiisu.
Kononel Abiyi gaafa muudamu gara boodaa deebi’ee akeeka Minilki bakkaan gahuuf akka hawwu ifatti dubbatee jira. Suuta suuta gara boodaa yoo deemus teenyee ilaalaa jirra. Waan inni an Ormoo ykn Abbaa koo Oromoo dha jedhee himachuu qaana’e Oromoon Masaraa Minilki seene jedhee warra weedisuuftu dhukkuba qaba. Jaalalaa fi dhaabbii uummata Oromoo yoo hin qabu tahe nama tokko kan Oromoo godhu DNA isaa miti. Hojii isaa malee namni DNA isaa qorachuuf deemu hin jiru. Akeeka isaa kana bakkaan gahuuf jecha Mootii Habashaa tokkoof handhuuraa Oromiyaa irratti siidaa dhabuu jalqabeera. Kan warra hafees tokko tokkoon tareessuuf deema.
Mootota Habashaa darban of irraa kaasuuf Uummatni Oromoo waregama guddaa baasee jira. Ilmaan isaa qaroo aarsaa baasaa ofii irraa darbaa dhufe. Kaleessa qarree fi Qeerroon Oromoo irree tokkoon yaroo Down! Domn! Wayyaanee jedhan kan dagatan qabu. Baabura Wayyaanee baatee deemuu OPDO jalaa gatuu dhiisuutu bade. OPDOn baabura qullaa diina Uummata Oromoof tajaajila laatu waan taateef Oromiyaa keessa akka ijaarsatti buqa’uu qabdi. Uummatni Oromoo OPDO ammatee taa’aa nagaa argachuu hin danda’u. Ilmaan isaa qaroo tahan guddifachuun itti jabaachaa jira.
Warri maqaaf Oromoo, Mootummaa EPRDF TPLF harkaa dhaale Uummata Oromoof maal hojjetan? Maal hojjechuuf immoo tilmaamaa jiru? Amma har’aatti hidhaan, ajjechaan,saamsii fi qe’ee isaa irraa kumaatama hedduun buqqa’uun uummata Oromoo irraa hin dhaabbanne. Mirgi dhala namaa dhiitamuun, dubartoonni Oromoo gudeedamuun fi Oromoon mana wajjin gubamuun itti fufee jira. Daa’ima waggaa sadeetti amma jaarsa waggaa sadeettamaa ajjeesuun hiikaa maalii qaba? Biyya Impaayeera Itoophiyyaa keessa har’a kan Komandi postiin bulu Oromiyyaa qaofa. Yaa Uummata Oromoo kana argachuuf dhiiga ilmaan kee Wayyaanee sooraa baatee? Walii gala OPDOn akka ijaarsatti amajaajii dhiiga Uummata Oromoo dhuguun jiraatu akka taate waan wal gaafannu miti.
Kan biyya bulchu erga OPDO dha tahee nageenyi Uummata Oromoo kan kabajame tahuu hin qabu? Garuu OPDOn Oromiyaan dirree waraana akka tahu maaliif akka filate namaaf galaa? Eritrea keessatti humni biyyaa Tigray of ijaaree hidhaana isaa wajjin utuu Mootummaa Kononel Abiyi eehama hin gaafanne uummata isaatti dabalamee jira. Namni qawwee galshi jedhee dirqe tokko hin jiru. Warri TPLF keessaa arii’amanii turan illee itti deebi’anii TPLF jajjabeessaa jiru. Kan amma funyaanitti hidhatee lolaaf foolachaa jiru TPLF akka tahe namni hin hubanne hin jiru.
Akkuma kana ijaarsonni Amhaaraa lakkobsa hin qabne biyya Eritrea keessatti hidhatanii socho’aa turan hidhannaa isaanii wajjin gara uummata isaanii deebi’anii nagana jiraachaa jiru. Kana malee prezidaantiin MNA ifatti Uummatni Amhaaraa hin hidhata malee hin hiikatuu jedhee labsaa jira. Yaroo Impaayerri Itoophiyaa guutuun hidhannaan wal dorgomaa jiru kana keessa hojiin OPDO inni duraa maalii Oromoo hiikachisuu tahee argame?
Waan ifatti mul’atu tokko deemsa kononel Abiyi qofa. Maqaa Itoophiyaan Mootummaa Amhaara deebisee ijaaruuf tilmaama akka qubu dhoksaa hin jiru. Tilmaama isaa kana kan abjuu qofa jalaa godhuu danda’u humna Oromoo keessaa ABO fi WBO akka tahe waan beekuuf waan hundaa dura yoo danda’e balleessu yoo dadhabee immoo laamshesuu barbada. Tilmaamni kun mul’ata isaa irra kan dhufe utuu hin taane harcaatota Dargiittiin kan dhiibamaa jiru dha. Kononel Abiyi ifa baasee yaroo gabaaba booda maqaa sabaan ijaaramuun akka jiraachuu hin qabne dubbatee jira. Utuu hin jaalatiin maqaa Itoophiyaan qofa ijaaramuu qabna jechuu dha. Waa’ee aadaa, afaan, seenaa keenyaa kaasuu hin qabnu. Hireen ofiin of bulchuus hin argamu. Mootummaa kana jalatti aadaa, afaan fi alaabaa tokko qofaa qabaachuuf deemna. Innis kan Amhaara akka tahe wal nama hin gaafachiisu.
Waan Obbo Lamaan Itoopiyaan suusii dha jedhee fi Kononel Abiyi immoo akeeka Minilki bakkan gahuu hawwii qaba jedheef Amhaarri warra kana akka ijoollee isatti ilaala jira. Warri kun Waaqa biraa nuuf ergaman yaroo jedhan illee ni dhageenya. Prof. Masfin Weldemariyam nama Motummaa Haayile Silaasee fi Dargii gursuun beekamtii guddaa qabu “team Lamaan kun qoricha Itoophiyaa waan tahniif amma lubbuun koo jiru nan gargaara” jedhee ture. Itoophiyaa fayyisuuf dhiigni Uummata Oromoo akka bishaanii yoo dhangala’e dhimmaa Habashaa miti.
Har’a Amhaarri ka’ee Finfinneen kan kooti. Finfinnee fi Oromiyaa biyyi jedhamu hin jiru. Magaalonni gugguddoon kan akka adaamaa, Diree Dawwaa, Hararii fi kan fakkaatan kan Amhaaritti yoo jedhe waan nu ajaa’ibu hin qabu. Gad aantummaa OPDOtu gara kana nu geessaa jira. Injifannaa harka keenya keessa jiru Amhaarri harka nu miicciree fudhachuuf yaalli godhu kan mijjeessaaf jiru OPDO dha. Yaroo OPDOn xiqqoo afanii gufatee waa’ee Oromoo dubbatee itti roorisuuf doorsisuu jiru. Dabballoonni OPDO waa’ee Oromoo fi Oromiyaa ifatti dubbachuu sodaatanii jiru. Jidduu kana olola Obbo Lamaa irratti oofaa jiran hordofaa. Oromota naannoo Harhargee irraa buqqa’an naannoo Finfinnee qubsiifna duwwaa jedhe. Akkamitti naannoo magaala keenya Addis Ababa qubsiisama jedhanii iyyaa jiru. Oromoon biyyaa Oromoo keessa bakka barbaade yoo qubate Amhaara maalitu galcha?
Yaa qarree fi qeerroo Oromoo yaroon OPDO carraa laatne teenyee ilaallu darbeera. Mana barumsaa galtanii afaan Amhaaraa barachuuf kan deemu isini akka tahe hin dagatiina. Amhaara jalatti abootiin keenya nama isaa qofa utuu hin taane fardaa fi gaangee isaanii garaa funyoon safaranii qalbuun dirqama ture. Warri kun beekumsii fi dandeetiin isaanii uummata Oromoo gadi waan taheef hammenyi isaan uummata keenya irratti hojjetan dubbachuun isaa nama jibsiisa. Utuu salphinni Wayyaanee caalu nu hin mudatiin yaroon DOWN! DOWN! OPDO! Jennu har’a. Mootummaa of ijaaree humna horate tokko of irraa kaasuun salphaa miti. Har’a utuu ishee hidda lafatti hin jabeefatiin buqqifnee darbuu qabna.
Seenaa Qabsoo Oromoo Haaluudhaan Qabsicha Galii Isaa Hanqisuuf Shirri Xaxamu Kamuu Hin Milkaawu !
Seenaa Qabsoo Oromoo Haaluudhaan Qabsicha Galii Isaa Hanqisuuf Shirri Xaxamu Kamuu Hin Milkaawu ! (Ijoo…
Caasaa burjaajessaa OPDO